Soomaalida Maraykanka oo caqabado ka sheeganaya aaditaanka Xajka | arlaadii.com
Home WARARKA MAANTA Soomaalida Maraykanka oo caqabado ka sheeganaya aaditaanka Xajka
Soomaalida Maraykanka oo caqabado ka sheeganaya aaditaanka Xajka
Sacuudiga oo looga digay in ay ku khamaarto dagaal ay la gasho dowlada Iran
Marwo Monica Juma Goorma Ayay Qaladaadkeedii Hore Wax Ka Baran ?
James Swan oo fariin muhiim ah usoo diray dadka Soomaaliyeed (Akhriso)
Dowladda Kenya oo soo iibsatay diyaarado ay kula dagaalameyso Al-Shabaab
Tirada dadka shacabka ah ee Mareykanka uu ku dilay Somalia oo lasoo bandhigay
Qaar ka mid ah Soomaalida Maraykanka oo BBC-da la hadlay ayaa sheegey in caqabado ay kasoo wajaheen aaditaanka Xajka sannadkan , sababtuna ay tahay amarkii socdaalka ee madaxweyna Donald Trump.
Wariyaheena Maraykanka ayaa kusoo waramay in culeeska uu haysto dadka aanan ahayn muwaadhiniinta buuxa ee Maraykanka, gaar ahaan kuwa haysta baasaboorrada kumeelgaarka ah ee socdaalka loogu talogalay iyo kaarka lagu suggo muwaadhinimada ee Green Cardka loo yaqaano.
Mid ka mid ah Soomaalidaasi waa Xuseen Cabdi Maxamed , isaga oo BBC-da la hadlay ayuu yiri “Sanadkan waxaan rabay in aan xajiyo, balse markii aan baasaboorkeyga safaaradda u direy waxay igu dhaheen damaanad kaama noqon karno haddii aad baxdo in aad dalka kusoo laaban karto, sababtoo ah sharciga hadda lasoo rogey ayaa mamnuucaya in dadka green card-ka haysta aysan dalka kusoo laaban karin
Balse waxaa jira dad badan oo muwaadhiniin dhamaystiran oo Maraykan ah , kuwaasi oo sannadkan waajibaadka xajka soo gudanaya, waxaana ka mid ah Cabdullaahi Yuusuf, wuxuuna yiri “Aniga dadka xajka aadaya ayaan ka mid ahay, balse waxaa jira dad badan oo aanan fursadaasi helin oo ka cabsaday sharciga cusub “.
Shirkadaha dhoofka Xajka qaabilsan ayaa dadka kala talinaya arrimaha safarka, waxayna u qabtaan adeegyada soo saarista fiisaha iyo tigidhada, laftoodana waxa ay caqabad ka haysataa safaaradda oo illaa hadda aanan soo saarin fiisooyinka dadka haysta baasaboorka kumeelgaarka.
Maxamed Rashiid waxa uu ka mid yahay hawlwadeenada shirkadahaasi, wuxuuna qabaa in dadka ay iyagu uun iska cabsanayaan, ee uusan jirin wax sharci ah oo ka hor istaagaya in ay safraan, wuxuuna yiri “dadka travel documentiga haysta iyo green cardka waa laga saaray dadka xayiraada ku dhacayso, garyaqaano Soomaali ah ayaana sheegey, anagana dadkii sidaas ayaan ugu sharxaynay”.
Dadka baqdinta qaba waxaa ka mid ah Cabdullaahi Jaamac oo sidan qaba “Minnesota ayaan ku noolahay, sannadkan waan jeclaa in aan xajka aado, balse shuruucdan is bad-badalaya awgood ayaan u baaqday, waddankan seddex sanno ayaan joogaa”.
Madaxweyne Donald Trump ayaa soo rogey sharci dadka Maraykanka ka mamnuucaya muwaadhiniinta 6 dal oo Muslimiinta u badanyihiin, wuxuuna sharcigaasi sidoo kale caqabado kala kulmaya dadka asal ahaan kasoo jeeda dalalkaasi ee Maraykanka ku sugan, kuwaasi oo aanan wali helin sharciga muwaadhinimada Maraykanka.
Hase yeeshee isbadalo lagu sameeyey sharcigaasi socdaalka ayaa la sheegey in uu fududeynaya in dadka waraaqaha socdaalka haysta ay safri karaan, dalkana dib ugu soo laaban karaan, balse sidaasi oo ay tahay waxaa jirta hubanti la’aan badan.
Filim ka hadlaya nolosha dhabta ah ee Soomaalida Maraykanka
Ururka Ka Joog oo diiday deeq uu Maraykanku siin lahaa
Codbixinta dhici doonta Talaadada waxaa lagu wadaa inay codkooda ka dhiibtaan dad waayeel
Tirada dadka shacabka ah ee Mareykanka uu ku dilay Somalia oo...